Firaisankina Mifamaly, Nanome Fanampiana Ho An’i Skopje Niharan’ny Tondra-drano Ny Serba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2016 8:08 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Português, Español, English
“Tondra-drano i Skopje, Asehoy ny Firaisankina!” Ao anatin'ny andron'ny tondra-drano ao Skopje, niantso ireo mponina namana mba hanatevin-daharana ny ezaka fanavotana ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao Šabac. Sary avy amin'ny @maliremorker, nahazoana alalana.
Andro vitsy taorian'ny tondra-drano nahafatesana olona tao an-drenivohitr'i Makedonia, Skopje, nikarakara hetsika fanangonana sakafo sy fitaovana ireo mponina ao an-tanàna Serba ao Šabac.
Tsy kisendrasendra ny firaisankinan'izy ireo. Šabac no voa mafy indrindra nandritra ny tondra-drano Mey sy Aprily 2014, raha voakasika ihany koa ny ampahany betsaka tao Serbia sy Bosnia ary Herzegovina. Nanome fanampiana marobe tamin'izany fotoana izany, ary koa mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo ireo firenena manodidina anisan'izany i Makedonia.
“Ry Olom-pirenen'i Šabac, Loznica, Bogatić, Koceljeva, Vladimirac, Krupanj sy ny tanàna / kaominina hafa, fotoana izao! Manehoa firaisankina amin'i Makedonia sy ny tanànan'i Skopje! Tsy hadinontsika ny fanampian'izy ireo tamin'ny taona 2014!
Fanangonana fanampiana amin'ny [Zoma, Sabotsy sy Alahady] ao amin'ny Lalana Hajduk Veljko 12 ao Šabac.
Fanampiana tsara omena: fitaovana ara-pahadiovana sy famonoana mikraoba, couche (salakan-jaza), sakafo am-bifotsy ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, paty, atin'akanjo, bà kiraro, akanjo, bodofotsy, kodoro, trano lay. Aza mitondra vola na fanafody.
Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 061 / 154-808 sy 063 / 43-73-10
Olom-pirenen'i Šabac tohanan'ny Fikambanana Svetlost (Fahazavana) sy ny Foibe Ara-tontolo iainana Eoropeana.”
Araka ny filazan'ny mpikarakara ny hetsika, na dia fotoam-pialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro aza izany, fotoana izay maha-vitsy ireo mponina ao an-tanàn-dehibe, nahavita nanangona vatsy iray kamiao ihany izy ireo izay ho alefa any Skopje ao anatin'ny roa andro. Hitohy mandra-pahatapitry ny krizy ny hetsika.
Šabac ho an'i Skopje
Skopje, tanànan'ny firaisankina.
Namoaka ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra teo amin'ny olona ny fotoanan'ny krizy. Niezaka nanodina ny saina tsy hijery izay tompon'andraikitra tamin'ny fisorohana ny tondra-drano sy ny fepetra tsy ampy noraisin'ny manam-pahefana ny sasany tao Makedonia tamin'ny alalan'ny famelomana ny afon'ny fankahalana ara-poko. Ohatra, namoaka lahatsoratra mitondra lohateny hoe “Aiza ireo “Serba rahalahy” mba hanome fonosan-drano sy sakafo ho an'ny fianakaviana niharan'ny tondra-drano?” ny fampahalalam-baovao manohana ny fitondrana (novatsian'ny orinasam-panjakana ara-bola, tahaka ny Skopje Waterworks and Sewage (Orinasa Misahana ny rano sy ny tatatra) tamin'ny dokambarotra. iray)
Raha ny marina, nanome fanampiana ara-bola na nandefa mpiasa mpamonjy voina ny fanjakana Balkan rehetra, ary nanao izany koa ny Vondrona Eoropeana sy ny sasany amin'ireo mpikambana nandritra ny herinandro taorian'ny tondra-drano. Tsy lazaina intsony ny ezaka manokan'ny mponina tao Šabac.
Azo antoka fa tsy vao voalohany i Skopje no nahazo fanampiana. Taloha, fantatra ho “tanànan'ny firaisan-kina” izy noho izy naorina indray tamin'ny fanampiana iraisam-pirenena niainga tamin'ny tsy misy (aotra) taorian'ny horohorontany nandravarava tamin'ny 27 Jolay 1963. Izany fanampiana izany dia ahitana ny fandraisana anjara avy amin'ny Tandrefana sy ny Tatsinanana, namela vetivety ny fankahalana tamin'ny Ady Mangatsiaka.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, manodidina izany fotoana izany, namoaka sary, horonantsari-mihetsika na hira tamin'izany fotoana izany miaraka amin'ny tenirohy #СкопјеСеСеќава (“Mahatsiaro i Skopje”) ny mpisera Twitter Makedoniana.
Ohatra, nandritra ny volana Jolay tamin'ny taona lasa, namoaka teny notsongaina manokana tamin'ny boky momba ny taona 1963 ny mpisera Twitter iray, Yokio San:
Tsy tokony hijanona ho tatitra an-gazety fotsiny amin'ny fahoriany voalohany i Skopje fa tsy maintsy andraikitsika tsirairay avy, ny olona rehetra izay mety ho lasa Skopiana, anio na rahampitso, rehefa tratran'ny voina tahaka izao” – Alberto Moravia, 1963.
“Tsy sarimihetsika i Skopje, tsy tantara mampangitakitaka izay heverintsika fa tranga lehibe indrindra. Fivondronan'ny tolon'ny olona ho an'ny fahafahana izy, miaraka amin'ny vokany izay mitarika tolona bebe kokoa sy ny tsy fanekena ny faharesena.” – Jean-Paul Sartre, 1963.
“Nilaza tamiko ny ray aman-dreniko fa tsy manana sekoly i Skopje ankehitriny. Tsy misy toerana hianaran'ny ankizy. Tsy nandeha tany amin'ny toerana fialam-boly aho omaly. Fa kosa nampiasa ny vola mba hividianana pensilihazo, kahie sy gaoma ary alefako any aminao – – ho an'ny mpianatra avy any Skopje ireo. Nanoro hevitra ahy ny ray aman-dreniko mba hanasonia ity taratasy ity. ” – Mpianatra avy ao Amsterdam, 1963.
“Niaritra loza goavana i Skopje, saingy tsy maintsy manorina an'i Skopje indray isika. Miaraka amin'ny fanampian'ny fiarahamonina rehetra, ho lasa reharehantsika sy mariky ny firahalahiana sy firaisana, amin'i Yogoslavy sy izao tontolo izao izy.” – Josip Broz Tito, 27 Jolay 1963.
“Nahafahako nahita maso ny firaisankina iraisam-pirenena ao Skopje taorian'ny loza fito taona lasa izay ity fitsidihana ity. Resy lahatra aho fa afaka mitarika fiarahamiasa iraisam-pirenena lehibe sy mahomby kokoa eo amin'ny firenena, tanàna sy ny tanàna kely ny fifandraisana maha-olona tahaka izao.” – U Thant, Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana, 1970.